Ku saabsan - Isbahaysiga Caafimaadka Soogalootiga & Qaxootiga
Baahida Aasaasiga ah
Sharciga iyo Socdaalka
Ilaha Caafimaadka ee Qaxootiga
Caymiska Caafimaadka ee Qaxootiga
Bogga ugu weyn /
Waxaan aaminsanahay in qof kastaa uu awood u leeyahay inuu helo daryeel tayo sare leh, iyadoon loo eegin waddanka uu ka soo jeedo ama sharci ahaan. Anaga oo ah xirfadlayaal daryeel caafimaad, abaabulayaasha bulshada iyo u doodayaasha lashaqeeya bulshada muhaajiriinta iyo qaxootiga ee gobolka Washington, waxaan u abuurnay ilahaan macluumaad siyaasadeed oo casri ah, hagitaanada bulshada iyo dadaallada udoodida gobolkayaga. Bal eeg annaga Bogga siyaasadda wixii macluumaad ah ee aad la wadaagi karto shaqaalaha, asxaabta iyo xubnaha bulshada.
Waxaan nahay koox ka mid ah Xarumaha Caafimaadka Bulshada, hoggaamiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo daneeyayaasha bulshada ee maal-galiyay caafimaadka iyo fayoobaanta bulshadayada soo-galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ku ah gobolka Washington. Kooxdayada waxaa markii hore sameeyay Shabakada Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHNW) iyo Community Health Plan ee Washington (CHPW) oo ay iskaashanayaan Ururka Washington ee Caafimaadka Bulshada (WACH). Waxaa na hogaaminaya guddiga latalinta ee wakiilada ka socda qeybta daryeelka caafimaadka.
Ujeeddooyinkayagu waa kuwo fudud: in la horumariyo sinnaanta caafimaadka iyo in la kordhiyo helitaanka daryeel caafimaad oo la awoodi karo, oo tayo sare leh oo loogu talagalay muhaajiriinta iyo qaxootiga ku nool gobolka Washington. Waxaan la shaqeyneynaa hoggaamiyeyaasha warshadaha daryeelka caafimaadka, wada-hawlgalayaasha bulshada, kuwa aan macaash doonka ahayn iyo dhinacyada xiisaynaya si loo hagaajiyo xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah xubnaha ugu nugul bulshadayada. Sababta Waxaan aaminsanahay in daryeelka caafimaad uu yahay xuquuq aadanaha, waxaana dooneynaa in qof walba uu helo daryeelka uu mudan yahay. Baro sida aad nooga caawin karto inaan gaarno yoolalkayaga iyo taageerada bulshooyinka halista ugu jira.
Hawlgalka: Si loo bixiyo waxbarasho iyo tababar, u doodid, macluumaad, cilmi baaris iyo taakuleyn la xiriirta arrimaha saameynaya caafimaadka iyo daryeelka bulshada muhaajiriinta iyo qaxootiga ee Washington.
Hadafka Ururka: Si loo hormariyo sinaanta caafimaadka loona hagaajiyo xaalada caafimaad ee bulshada soogalootiga iyo qaxootiga ee Washington.
Shaqadeena waxaa wada sinaanta caafimaadka. Waxaan aaminsanahay in caafimaadku yahay xuquuq aadanaha iyo in shaqsi kasta uu helo fursad uu ku hogaamiyo nolol caafimaad leh.
Shaqadeena waxaa wada beesha. Waxaan si dhow ula shaqeynaa xarumaha caafimaadka bulshada iyo ururada bulshada ee daboola baahida bulshadayada soo galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah.
Shaqadeena waxaa wada doodidda. Waxaan u doodnaa ilaha taageerada, barnaamijyada, siyaasadaha si loo sii horumariyo caafimaadka dadka soogalootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah.
Dib loo eegay 6/21/2021
In la isku xiro lana xoojiyo xubnaha bulshada si ay ugu doodaan xuquuqda soogalootiga iyo qaxootiga, daryeelka caafimaadka, cadaalada iyo dib u habeynta siyaasada.
Akhri wax dheeraad ah..
Si loo bixiyo waxbarasho iyo tababar, u doodid, macluumaad, cilmi baaris iyo taakuleyn la xiriirta arrimaha saameynaya caafimaadka iyo daryeelka bulshada muhaajiriinta iyo qaxootiga ee Washington.
Wax dheeri ah baro..
Si loo hormariyo sinaanta caafimaadka loona wanaajiyo xaalada caafimaad ee bulshada soogalootiga iyo qaxootiga ee Washington.
Waxaan nahay koox ka mid ah Xarumaha Caafimaadka Bulshada, hoggaamiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo daneeyayaasha bulshada ee maal-galiyay caafimaadka iyo fayoobaanta bulshadayada soo-galootiga iyo qaxootiga ee WA.
2022 Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington
Waxaan daneyneynaa arimahaaga gaarka ah. Waxaan ugu talagalnay boggan inuu ammaan u ahaado dhammaan booqdayaasha. Marnaba ma weydiisaneyno macluumaad shaqsiyeed, aqoonsi. Ma wadaagno wax macluumaad ah oo ku saabsan boggan dowladda.